Mudede faces theft charge - The Standard
HomeNewsMudede faces theft charge
FORMER Registrar-General Tobaiwa Mudede appeared in court on Thursday charged with stealing farming equipment and invading his neighbour’s Mazowe farmhouse following a land dispute.
It is alleged that following a boundary dispute with his neighbour, Jacqueline Mukanganyama at Ballinettey Farm in Mazowe sometime in 2009, Mudede enlisted the services of police to evict her and grab irrigation equipment worth US$10 000.
When Mukanganyama tried to recover her property, Mudede enlisted services of police officers and assaulted her.
Meanwhile, Police Commissioner Douglas Jabulani Nyakutsikwa is seeking to have the matter in which is he is accused of abusing his office to get three stands from Harare City Council struck off the roll.
Nyakutsikwa, who was represented by lawyer Tapson Dzvetero, alternatively wants the court to postpone hearing of his matter until the High Court has ruled on an application to have his matter referred to the Constitutional Court.
Nyakutsikwa is jointly charged with City of Harare housing director Addmore Nhekairo on criminal abuse of office charges, but he argues that the matter had been
He is challenging the constitutionality of the Special Anti-Corruption Unit and has filed papers at the High Court challenging continuation of his hearing at the magistrates’ court, when he is challenging the constitutionality of his arrest.
Ruling on the matter is expected on June 1, 2021.
Previous articleHarare family collects wrong corpse, discovers mix-up shortly before burial
Next articleCSC’s British investor has net value of £4